I-Sony Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
Isony yenye yezona zinto zilindelweyo kule MWC 2019, ukusukela oko Bathembisa ukusishiyela uthotho lweendaba yokubaluleka. Kule mpelaveki kuvele amarhe okuba inkampani izokwazisa ngotshintsho lwamagama kwiifowuni zayo, emva kokuvuza malunga noku. Utshintsho lwamagama oluye lwazaliseka ekugqibeleni. Kuba basishiya noluhlu oluhlaziyiweyo lwee-smartphones. Iimodeli zokuqala zivela kuluhlu oluphakathi: I-Sony Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus
Ezi Sony Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus zizixhobo ezilandela umgca oqhubekayo, ngokuyinxalenye, wophawu lomkhiqizo. Nangona bemi ngaphandle ngakumbi ukubheja kwakhe kwiscreen esikhulu, ehlala uninzi lwangaphambili lwesixhobo. Yintoni esinokuyilindela kolu luhlu lwaziwayo lakwaSony?
Ukusukela ngale modeli, inkampani iyayishiya i-18: 9 okanye i-19: 9 ratio inefashoni kwimarike. Bahambe inyathelo eliya phambili malunga nokusetyenziswa ngaphambili kwaye basishiya no I-smartphone efika nge-21: 9 ratio. Iscreen esingenasiphelo, esithembisa ngamava omsebenzisi wokuntywila ngawo onke amaxesha.
Ke Sithetha ngayo nganye kwezi zimbini ii-smartphones ngokukodwa. Ukuze ubone umohluko phakathi kwabo.
1 Ukucaciswa kweSony Xperia 10
2 Ukucaciswa kweSony Xperia 10 Plus
Ukucaciswa kweSony Xperia 10
Kwinqanaba lobugcisa, Sijongene nemodeli yoluhlu oluphakathi. Ihambelana kakuhle ngokweenkcukacha, nangona kukho izinto ezimbalwa apho uphawu lunokwenza impazamo, njengebhetri yalo, ebonakala ngathi inqabile. Kodwa le yinto enokubonwa ngokusetyenziswa kwesixhobo. Oku kukucaciswa okupheleleyo kweSony Xperia 10
Ukucaciswa kobugcisa Sony Xperia 10
Umzekelo Xperia 10
Isikrini I-6-intshi ye-LCD enesisombululo esipheleleyo se-HD + kunye ne-21: 9 ratio
Inkqubo Snapdragon 630
Ikhamera esemva 13 + 5 MP
Conectividad I-Bluetooth 5.0 3CA LTE CAT12 / 13 i-WiFi 802.11 ac GPS i-GLONASS
Ezinye izinto Umfundi weFingerprint kwicala leNFC
Ibhetri I-2.870 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ubukhulu Ubukhulu: 156 x 68 x 8.4 mm
U bunzima I-162 gram
Ngaphandle kwamathandabuzo, isikrini yeyona nto itsala ingqalelo yale smartphone. I-brand ikhethe ukuqhubeka nokunciphisa izakhelo zayo, ngakumbi amacala. Ke le Sony Xperia 10 Sele ikufutshane kakhulu kumxholo wazo zonke izikrini. Ukongeza, ukonwaba kwabaninzi, akusetyenziswanga notch okanye umngxunya kwiscreen.
Njengomprosesa basishiya ne-Snapdragon 630, Olukhetho olukhulu phakathi kuluhlu oluphakathi. Inamandla ngakumbi kwaye isebenza kakuhle kunangaphambili, uSpapdragon 625. Nangona ibhetri esiyifumana kwisixhobo, i-2.870 mAh isenokungonelanga. Ngokukodwa ukuba sijonga ukuba yindawo ekumgangatho ophakathi we-smartphone. Nangona uSony ethanda ukusebenzisa la mabhetri kakhulu, kuya kufuneka sibone ukuba isebenza njani.
Malunga neekhamera, siyaqhubeka nokubona esikufumanayo kuluhlu oluphakathi. Ukubheja kweSony Xperia 10 kwikhamera engasemva kabini, ngelixa ngaphambili sinelensi enye. Ukongeza, ifowuni sele iza ne-Android Pie ngokwendalo njengenkqubo yokusebenza.
Ukucaciswa kweSony Xperia 10 Plus
Kwindawo yesibini sifumana enye le smartphone. Njengoko igama lakhe lisenza siqashele, le Sony Xperia 10 Plus yimodeli ethe kratya ngakumbi kunangaphambili. Inescreen esikhudlwana, esigcina i-21: 9 ratio, iprosesa engcono kwaye inamandla ngakumbi ngokubanzi. Kodwa ihlala ngaphakathi kuluhlu oluphakathi. Oku kukucaciswa kwayo:
Ukucaciswa kobuchwephesha i-Sony Xperia 10 Plus
Umzekelo Xperia 10 Plus
Isikrini I-6.5-intshi ye-LCD enesisombululo esipheleleyo se-HD + kunye ne-21: 9 ratio
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512GB)
Ikhamera esemva 12 + 8 MP
Ikhamera yangaphambili MP engama-8 ene-f / 1.4 ukuvula
Ibhetri I-3.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ubukhulu X x 167 73 8.3 mm
USony ubhaptize uyilo olutsha lweefowuni zalo ezinegama elithi Ultimate Wide. Sisikrini esikude kunale nto siyibonayo kwezinye iimveliso namhlanje. Le yinto enomdla, kuba igcina ububanzi bezinye iimveliso, nokuba zincinci, kodwa ngescreen esikude. Kuya kuba lunomdla ukubona ukuba isebenza njani xa usitya umxholo okanye usebenzisa iiapps kwisixhobo.
Kuko konke okunye, siyabona ukuba le Sony Xperia 10 Plus yeyona inamandla ngakumbi phakathi kuluhlu oluphakathi kunolo lwangaphambili. Kule meko, kusetyenziswa iprosesa ye-Snapdragon 636, ebhetele kunangaphambili. Ukongeza, iza nomthamo omkhulu we-RAM ngaphakathi, oya kuthi uvumele ukusebenza okungaphezulu kwamanzi ngalo lonke ixesha. Ibhetri, inkampani isebenzise i-3.000 mAh Kule meko, kunye nentlawulo ekhawulezayo. Ukugcinwa kwe-64GB kuyandiswa nge-MicroSD.
Njengakwenye imodeli, sifumana isivamvo somnwe ecaleni kule Sony Xperia 10 Plus. Iza nePie ye-Android ngokwendalo, njengoko iqinisekisiwe kwinkcazo yayo. Ngokubhekisele kwiikhamera, babheja ngokudityaniswa kabini ngasemva kunye nesenzi sensor esinye ngaphambili kweso sixhobo. Into esiyibona rhoqo kuluhlu oluphakathi.
Kwimeko ye-Sony Xperia 10, sinokubona ukuba kuya kubakho uhlobo olunye kuphela lwefowuni ethengiswayo. Kuqinisekisiwe ukuba iyakwaziswa kwintengiso ngo-Matshi, ngombala omnyama, isilivere, umbala oblowu we-navy kunye nepinki. Nangona okwangoku singenaxabiso ngesixhobo. Siyathemba ukudibana nawe kungekudala.
Njengakwimodeli edlulileyo, asinayo idatha eninzi ngalo mzuzu malunga nokumiliselwa kweSony Xperia 10 Plus. Uhlobo alusinikanga mihla, nangona kulindeleke ukuba iphinde yenzeke ngo-Matshi. Kwimeko yakho, uya kuba nakho ukuthenga ifowuni ngombala omnyama, isilivere, i-navy blue kunye negolide. Asazi nto malunga nexabiso eliza kuba nalo. Ke sinethemba lokwazi ezinye iinkcukacha kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus: Uluhlu oluphakathi lukaSony (Ividiyo)